ICase-Hunan Nanbeiwang Biological Technology Co, Ltd.
Ukukhiqizwa kwe-ursodeoxycholic acid ngokusebenzisa indlela ye-enzyme yebhayoloji esikhundleni sendlela yamakhemikhali ekhiqizwe yinkampani yethu kuxazululwe izinkinga zokuvikelwa kwemvelo kanye nokusebenza kahle kokukhiqizwa kwamakhasimende ethu u-Changde Yungang Biotechnology Co, Ltd. izindleko zokukhiqiza kanye nezinzuzo ezengeziwe zomnotho. Iphrojekthi yenziwe yezimboni.
Inkampani yethu ihlole ngempumelelo iqoqo lonke lobuchwepheshe obusha bokukhipha, ukuhlanza kanye nokuqinisa amaprotheni enzyme kumagciwane akhiqiza izakhi zofuzo, ibeka isisekelo esiqinile sobuchwepheshe besakhiwo se-ursodeoxycholic acid ngendlela ye-enzymatic. Amasu anjengokulandelayo:
1. Ngokokuqala ngqa, i-enzyme yochungechunge lwe-UD isetshenziswa kwinqubo ye-ursodeoxycholic acid. I-enzymatic synthesis ye-ursodeoxycholic acid yenziwe ngamakhemikhali ngokuqhathaniswa neyedlule. Indlela ye-semi-synthesis inezinzuzo zenqubo elula, ukusebenza kahle kakhulu komkhiqizo kanye nokuvikela imvelo .;
2. Ngokusebenzisa inducer entsha, nquma izimo ezifanele zokucwilisa ukuthola isivuno se-enzyme ephezulu ngokufunda ifomula yokuthambisa;
3. Ukuqoqwa okuqondile kwama-enzyme okubulala amagciwane ukukhiqiza, ukwenza lula izindlela zokukhishwa nokuzihlanza kwe-enzyme, futhi kulondolozwe umsebenzi we-enzyme ngempumelelo enkulu.